Uganda oo sheegtay in Somalia aysan weli ka jirin dowlad awood leh oo amniga hanan karta - Latest News Updates
Uganda oo sheegtay in Somalia aysan weli ka jirin dowlad awood leh oo amniga hanan karta
Taliyaha ciidamada Uganda ee qaybta ka ah Hawlgalka AMISOM ee Somalia, Brig. Kayanja Muhanga ayaa sheegay inaysan Somalia ka jirin dowlad awood ah, ayna ka jiraan colaado caqabado ku ah shacabka iyo ciidamada nabad-ilaalinta u jooga.
Sarkaalka oo warbixin kooban siinayay kaaliyaha ergayga cusub ee Midowga Afrika qaabilsan Somalia oo lagu magacaabo, Simon Mulongo, ayaa xusay in ciidamada AMISOM aysan awood u yeelan doonin in ay Al-shabaab Somaia ka cirib-tiraan haddii aysan helin qalab dagaal oo ay ka mid yihiin diyaarado dagaal. Sidoo kalena ay aad u liitaan gaadiidkooda dagaalka iyo qalabka ay ciidamadu iskula xiriiraan.
“Dalka Somalia weli waxaa ka jira dhibaatooyin badan oo u baahan in wax laga qabto. Dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah colaadaha soo laalaabtay ee ku saleysan beelaha, is-qab-qabsiga dhul-beereedka iyo awood-sheegashada maamul ee Magaalada Marka ee xarunta Gobolka Shabeellaha Hoose,” ayuu ku yiri Muhanga oo akhrinayay bayaan ay soo saareen.
Sidoo kale, Taliyaha ayaa sheegay in dhibaatooyinka ay xaaladda Somalia ka dhigeen mid adag, sidoo kalena sababtay in Al-shabaab ay weerarro gaadmo ah kusoo qaadaan ciidankooda, kuwaasoo khasaare badan ay kasoo gaarto.
“Hanjabaadaha iyo Qaraxyada ay kooxaha Argagaxisada ahi u adeegsadaan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa ka dhigay xaaladda mid cakiran oo aan u muuqan in wax laga qaban karo,” ayuu Muhanga ku daray hadalka.
Mar uu ka hadlay tallaabooyinka ugu wanaagsanaa ee ay ciidammadoodu ka qabteen Somalia ayuu sheegay inay ka mid ahaayeen; sugidda amniga intii lagu jiray doorashooyinkii xildhibaannada iyo hoggaanka dalka. Sidoo kalena ay ka mid yihiin buu yiri inay gacan ka geystaan sidii loo sugi lahaa amniga hay’adaha Qaramada Midoobay ee Somalia ku sugan.
Sarkaalku wuxuu xusay in xilligaan aysan habboonayn in ciidamada Ururka Midowga Afrika ka socda aysan ka bixin Somalia maadaama ay dhibaatooyin weli ka jiraan dalka, isagoo dalalka gacanta siinaya AMISOM ay ka fiirsadaan sidii hawlgalku uu u sii socon lahaa.
“Waxaa wanaagsan in si wanagasan looga fiirsado ka bixitaanka AMISOM ee Somalia, waayo innagu ma doonayno inaan aragno Somalia oo mar kale ku soo laabata sidii ay ahayd sanado ka hor, maalmo yar uun kaddib markaan ka baxno,” ayuu yiri hadalkiisa daba dhigay Brig. Kayanja Muhanga.
Ugu dambeyn, Hadalkan ayaa kusoo beegmaya Al-shabaab ayaa waxay weli awood u leedahay inay qaraxyo iyo weerarro ka fuliso Soomaaliya, waxaana dhawaan tiro ciidamada Uganda ka tirsan ay ku dileen weerar gaadmo ah oo ka dhacay deegaanka Gol-weyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose.